Mahafinaritra ahy mandritra ny fanamasinana Mariazy ataon'ny mopera foana io fanontaniana io amin'ny mpanatrika tonga eo. "Izay manana ambara amin'ny mety anakanana ny fanambadian'izy roa ireto, dia mitenena izao, raha tsy izany dia mangina mandrakizay". Toy izany koa ianareo amin'ny douane ao, ianareo ao amin'ny PAF miambina ny sisin-tany, "mitenena raha manan-kambara" anakanana izao passoire ao izao, raha tsy izany mangina mandrakizay, ary aza be taraina aty ambadika aty avy eo, fa efa vita ny mariazy amin'ny fahantrana sy kolikoly tsy azo atao inona intsony fa zakao mandra-maty eo, fa tsy be takoritsoka eo intsony. Tsy misoronaPatrick
Nanao fanambarana ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny Malagasy ho fampahafantarana ny fifampiresahana eo amin’ny Fanjakana malagasy sy ny governemanta afrikana tatsimo mikasika ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko tra-tehaka tatsy Afrika Atsimo. Raha tsiahivina dia natolotry ny Minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy an-tanana ny Masoivoho afrikana tatsimo miasa sy monina eto Madagasikara, ny 10 janoary 2021 lasa teo, ireo antontan-taratasy fangatahana fampiharana ny fifandraisana iraisam-pirenena hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko, sy ireo olona miisa telo voasaringotr’ity raharaha ity. Nampitain’ny Masoivoho tamin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahinin’ny Firenena Afrika Atsimo (Departemantan’ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa) izany fangatahana izany. Ity farany kosa no nanolotra ireo antontan-taratasy ny tompon’andraikitra ara-pitsarana mahefa any an-toerana. Eo andalam-pandinihina ny fangatahan’ny Fanjakana malagasy izy ireo ankehitriny.
Namoaka ny didy (Arrêt n°02-HCC/AR) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 12 janoary 2021 mamaritra ny fahabangan-toerana sy manolo ny depiote Ankazobe taorian’ny nahafatesan’ny tompon-toerana, Ralalason Dera Harinjafimino. Araka io didy io dia Rakotoarisoa Rasoava Rija Jean no handray ny toeran’ny depiote Ankazobe eo anivon’ny Antenimieram-pirenana. Mpisolo toerana avy amin’ny lisitra IRMAR tao amin’ny fari-pifidianana Ankazobe ity farany. Nodimandry ny 1 janoary 2021 tao amin’ny hopitaly CHU Anosiala, Kaominina Anosiala, Distrika Ambohidratrimo, Ralalason Dera Harinjafimino.
Namoaka ny didy (Arrêt n°03-HCC/AR) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 12 janoary 2021 mamaritra ny fahabangan-toerana sy manolo ny depiote Ihosy, Faritra Ihorombe taorian’ny nahavoafidy ho Senatera ny tompon-toerana, Rakotomamonjy Neypatraiky André. Araka io didy io dia i Mong Mann Bismark, mpisolotoerana avy amin’ny lisitra «Indépendant Patraiky Managnandro» tao amin’ny fari-pifidianana Ihosy, no handray ny toeran’ny solombavambahoaka Ihosy Faritra Ihorombe ao amin’ny Antenimieram-pirenena.
jeudi, 14 janvier 2021 12:57
Karinem-pokontany : Hisy fokontany “pilotes” hanombohana azy ao Antananarivo Renivohitra
Hivoaka mialoha ny faran’ny volana ny ampahany amin’ny karinem-pokontany vaovao, araka ny fampitam-baovao ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 13 janoary 2021. Tsy voafaritra mazava moa na volana janoary diavina io na aoriana. Hisy ireo fokontany “pilotes” hanombohana izany ao anatin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Fiaraha-miasa eo anivon’ny sampan-draharaha eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika na ny PREA, ny Kaominina sy ny ministeran’ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ireo ministera isan-tokony izay nifandrimbona nanao ny fanisana isan-tokantrano ny taona lasa no hoentina manatanteraka izany. Tsy maintsy manana karinem-pokontany ny tokantrano rehetra manerana an’i Madagasikara rehefa manao raharaha ara-panjakana hahafahana mandrindra sy mandamina ary mamaly ny filàn’ny mponina, indrindra eny aminy biraom-panjakana.
Nandray anjara tamin'ny fankalazana ny Andron'ny Manamboninahitra niaraka tamin'ny Vondrona Mpiaro ny Filoha eo anivon'ny Fiadidiana ny Repoblika ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany 12 janoary 2021. Semban-drahona ny fankalazana tamin'ity taona ity noho ny fahalasanan'ny lehiben'ny Etamajaorin'ny Tafika anabakabaka, ny Général de Brigade Aérienne Radona Ellis Ratiarivelo, izay nodimandry ny 11 janoary 2021.
vendredi, 08 janvier 2021 15:11
Politika : Mbola samy te hilatsaka ho fidiana 2023
Raha ny tsilian-tsofina etsy sy eroa, dia samy mbola te hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 2023 i Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina ary Andry Rajoelina. Samy milaza te hamonjy ny firenena Malagasy avokoa.
Taorian'ny fanentanan'i Filoha am-perinasa Donald Trump ireo mpomba azy tsy hanaiky ny vokam-pifidianana ho filoham-pirenena amerikanina, ary nanentanany ny akana ny Capitole, foiben'ny fahefana amerikanina izay misy ny Kongresy, dia nirohitra niditra nanao amboletra, nandritra ny fivorian'ny Kongresy, ny solombavam-bahoaka sy ny senatera amerikanina, izay mivory manamarina ny vokam-pifidianana, ireo mpanohana an'i Donald Trump. Navoaka aingana tao amin'ny efitra fivoriana ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy, nisy ny famakiana fitaratra, fanimbana ireo birao sasany, fiakarana teny amin'ny toerana natokana ho an'ny filohan'ny andrim-panjakana, fanaovana zinona ny toerana. Nisy ny lakrimozenina nirefotra, ary nisy ny maty vokatry ny tifitra. Tsy nanaiky ny anakanana ny fanamarinana ny fifidianana anefa ny filoha lefitra amerikanina Mike Pence, izay samy Repoblikanina toa an'i Donald Trump ihany koa, na dia efa nentaniny tsy hanao izany fombafomba fanamarinana izany. Maro koa ireo senatera tsy nanaiky izao toetra nasehon'i Donald Trump izao.
Ifampizaran’ny vovonana politika IRMAR (Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina) sy ny MMM (Malagasy Miara-Miainga) ireo toerana miisa 12, ho an’ireo Loholona nofidian’ny mpifidy vaventy ny 11 desambra 2020. Toerana 10 ho an’ny IRMAR ary 2 ny an’ny MMM.Vehivavy ny iray tamin’ireo 12 voafidy, lohalisitra MMM voafidy tao amin’ny Faritany Toamasina. Ireto avy ireo Loholona voafidy isam-paritany, handrafitra ny roa ampahatelon’ny Antenimierandoholona, araka ny voka-pifidianana ofisialy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana androany alakamisy 7 janoary 2021 :
Hisy tetik’asa lehibe amin’ny fanoloana ny solosaina sy ireo “logiciel” hanafainganana ny asa manerana ny Boriboritany enina eto Antananarivo Renivohitra. Hisy ny fananganana trano vaovao na birao ho an’ny Boriboritany fahadimy izay atao eny Analamahitsy na Androhibe. Hisy kosa tetik’asa roa hipetraka haingana eny anivon’ny Boriboritany izay fiaraha-miasa amin’ny SAMVA. Hiverina amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra koa ny vola hanaovana ny jiro ka ho soloina avokoa ny takamoa na atao “Panneau solaire” mba ho mazava Antananarivo. Anisany nivoitra ireo raha tonga nitsidika ny mpiasa sy nijery ny zava-misy teny amin’ny biraon’ny Boriboritany fahadimy Ambatomainty ny Ben’ny tanàna an’Antananarivo Renivohitra Naina Andriantsitohaina ny alarobia 06 janoary 2021.